Praiminisitra: voafehy ny pesta, hovahana ny kitrotro…. | NewsMada
Praiminisitra: voafehy ny pesta, hovahana ny kitrotro….
Notanterahina, teny Mahazoarivo, ny fivoriana ho fiomanana amin’ny fiatrehana ireo loza voajanahary ny taona 2018-2019, teo ambany fitarihan’ny Praiminisitra, lehiben’ny governemanta, i Ntsay Christian.
Nisy, araka izany, ny fanaovana jery todika ireo asa vita sy ireo mbola hatrehina ary ny fijerena ny hevitra entina handrindrana izany eo amin’ireo sampandraharaha isan-tsokajiny voakasik’izany.
Niompana tamin’ny fijerena akaiky ireo valanaretina miparitaka sy ny haintany mahakasika ny faritra atsimo, indrindra ireo paik’ady entina miady amin’izany, ny fivoriana.
Nahomby ny asa natao tany atsimo, tahaka ny ao amin’ny distrikan’i Beloha sy Ampanihy, nahitana trangana tsy fanjarian-tsakafo. Nanamafy ny tokony hisian’ny firindran’ireo fanapahan-kevitra sy ny asa isan-karazany sahanin’ireo sampandraharaha misehatra mivantana amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary ny taona 2018-2019 ihany koa ny praiminisitra. Anisan’izany ny BNGRC, ny ONN, ny Fid, sy ny minisiteran’ny Mponina, ny fiahiana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Ankoatra ireo ireo ny mpiara-miombon’antoka.
Mikasika ireo valanaretina, nanambara ny praiminisitra fa efa voafehy ny pesta ary ao anatin’ny fandaminana ny vahaolana horaisina handringanana ny kitrotro isika amin’izao fotoana izao. Misy ny fanafarana ireo vaksiny ilaina hiatrehana izany.
Mba ho fitandroana ny fahasalamam-bahoaka, noresahin’ny praiminisitra ny fanampiana rehetra atolotra ny Samva, entina hanatanterahana ny fanadiovana ny tanàna. Ho hentitra ny fanaraha-maso ary hisy ny fanentanana hitandroana ny fahadiovana sy ny fanajana ny lalàna ankapobeny mifehy ny fahadiovana.
Ankinina amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola handaminana ny amin’ny sora-bola hanatanterahana izany rehetra izany.
Ankoatra ny loza voajanahary, notsindrin’ny praiminisitra manokana ny fisian’ireo minia mandoro tanety sy mandripaka ala.
Araka izany, azo lazaina fa efa vonona tanteraka amin’ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra isika amin’izao fotoana izao.